के हो ऐठन ? कतै तपाईलाई यस्तो त भएको छैन ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ समय: २२:३१:२३
१. मानसिक तनाब लिएर बिस्तारमा नजानु होला । यदि केहि मानसिक तनाब छ भने नुहाएर सुत्नु राम्रो हुन्छ ।२. सुत्नु अघि मोबि, दूध या प्रयाप्त पानी पिएर निदाउनुले एठन रोक्न सक्छ ।३. सबै भन्दा राम्रो केही पढ्दै निदाउनु हुन्छ प्राय मान्छेहरु पढ्दा निदाउछन र दिमाग पनि अन्तै केन्द्रीत हुन्छ ।